Site n'ịghọ Jumbo onye otu ị ga - akwado Rikoooo ma nweta uru ndị a
Oke nbudata ọsọ ruo 4000 KB / s = 4 nkeji kwa GB!
Ruo 12 Ihe ntanetere na ntanetị ma ọ bụ 12 njikọ maka adreesị IP = (4000 KB / sx 12)
Enweghị mgbasa ozi n'ebe ọ bụla, saịtị dị ọcha ma dị jụụ
Access ka ụfọdụ tinye-ons na goodies kere Rikoooo
Direct download si acha anụnụ anụnụ 'Download' button
Gini mere Jumbo ji di? Iziga ihe nbudata na ihe karịrị otu narị puku ndị ọrụ na-agụnye nnukwu ụgwọ. Akwụghị ụgwọ ndị ahụ naanị na mgbasa ozi. Otú ọ dị, site na atụmatụ Jumbo, ị nwere ike iji aka na-akwado Rikoooo.com online. Ndị òtù bụ n'ezie nhọrọ, ịnwere ike iwepụ faịlụ niile na ngwa ngwa.
* Gbaa ọsọ ọsọ ọsọ dabere na njikọ Ịntanetị na oge
Enweghị ike ịkwanye ọdịnaya ngwa ngwa.